रघुजी पन्तलाई प्रश्न- नागरिक आन्दोलनमा किन जानुभयो?
नेपाल लाइभ मंगलबार, माघ १३, २०७७, १४:४१
नागरिक आन्दोलनमा सहभागी नेकपा नेता रघुजी पन्त। तस्बिर : निमेषजंग राई
नेकपा (प्रचण्ड-माधव पक्ष) स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री रघुजी पन्त बृहत नागरिक आन्दोलनमा सहभागी भए।सोमबार बालुवाटारसम्ममा भएको प्रहरी दमनमा उनी समेत परे। उनीमाथि लाठी चार्ज भयो, पानीको फोहराले भिजायो।
नागरिक आन्दोलनमा पार्टीको नेताको सहभागितालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न समेत उठ्यो। उनी किन आन्दोलनमा गए?नेपाल लाइभले सोधेको प्रश्नमा पन्तको जवाफ छन् :
तपाईं नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री किन नागरिक आन्दोलनमा जानुभयो?
नागरिक आन्दोलनमा हिजो मात्रै होइन, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा समेत सहभागी भएको थिएँ। हिजो पनि आफ्नै इच्छाले गएको हुँ। आयोजकले बोलाएर गएको होइन। म पेशाले पत्रकार र लेखक हुँ। एउटा सचेत नागरिक पनि हुँ। नेता मात्रै नभएरै पत्रकार, लेखक नागरिकको रुपमा पनि मेरो परिचय छ। त्यसैले नागरिक आन्दोलनमा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउन गएको हुँ। मेरो आफ्नै इच्छाले गएको हुँ।
हिजोको आन्दोलनमा पछाडि थिएँ। मेरो राजनीतिक परिचय पनि छ भन्ने थाहा पाएरै आन्दोलनको पछाडि बसेको हुँ। उहाँहरूको भाषण पछाडि बसेर सुनिरहेको थिएँ। कार्यक्रम सकिएपछि गिरफ्तारी दिने भन्ने कुरा आयो। यहाँसम्म आइसकेपछि गिरफ्तारी दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भनेपछि अगाडि बढ्यौं।
शान्तिपूर्ण तरिकाले गिरफ्तार गरेर लगिएला भन्ने ठानेको थिएँ। तर, प्रहरीका लाठी नागरिकहरूको टाउकोमाथि बज्रन थाले। मेरै अगाडि एक जना साथीलाई चार/पाँच लौरा टाउकामा हिर्काइएपछि घाइते हुनुभयो। उहाँ बेहोस भएर सडकमै लड्नुभयो। त्यो दृष्य कसरी हेरेर बस्नु? त्यो त रोक्नु पर्‍यो। मैले रोक्न खोज्दा मेरै हातमा लाठीले हिर्काइयो। हातमा थोरै चोट पनि लागेको छ। पछि पानीको फोहोरा हानेर तितरबितर बनाइयो।
सचेत नागरिकले यो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ। त्यही चेतन ढंगले गएको हुँ। स्वभाविकै रुपमा मेरो चेतनाले घचघच्याएर मलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याएको हो। उहाँहरुले आउनैपर्छ भनेर डाकेको पनि होइन। नागरिक आन्दोलनमा सबैलाई आह्वान गर्नु भएको थियो। जसलाई इच्छा लाग्छ, ती नागरिक पुगेका थिए। त्यहाँ जो पनि जान सक्थ्यो।
नागरिक आन्दोलनमा नगएर पार्टीकै बैठक वा आमसभामा गएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन् नि?
यो संकीर्णता हो। म त्यहाँ भाषण गर्न गएको होइन। म ऐक्यबद्धता जनाउन गएको हुँ। तर जसरी सरकारले क्रुरतापूर्वक अमानवीय दमन गर्‍यो, त्यो दमन देखेपछि, आफ्नै अगाडि लाठी खाएको, बेहास भएर लडेको देख्न सकिँदैन नि। त्यतिबेला स्वभाविकै रुपमा प्रहरीलाई त्यसो नगर भनेर कराउने काम गरियो। प्रतिरोध गरियो। त्यो स्वभाविकै कुरा हो। प्रत्येक नागरिकले गर्ने कुरा यही हो।
हिजो शान्तिपूर्ण रुपमा भइरहेको आन्दोलनमा जसरी प्रहरीले दमन गर्‍यो। त्यो आफैंमा अमानवीय र क्रुररतापूर्वक अलोकतान्त्रिक ढंगले दमन गरियो। सरकारले यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत रुपमा आग्रह छ- संविधान र लोकतन्त्रमाथि हमला हुँदा देशभरीका नागरिक समाज जागरुप हुनुपर्छ।
काठमाडौका जुन नागरिक समाजका अगुवा छन्। कुनै नेता वा पार्टीका विशेषयका लागि आन्दोलनमा आएका होइनन्। उनीहरु संविधान रक्षाका निम्ति आएका हुन्। किनभने यो संविधान आउनुमा उहाँहरुको पनि योग्दान छ। उहाँहरु दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि सामेल हुनु भएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनमा अगुवाइ गरेर संघर्ष गर्नुभएको थियो। त्यसकै बलमा संविधान आयो। अब अहिले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने छ। त्यसैले प्रत्येक चेतनशील नागरिक, चाहे त्यो कुनै पार्टीमा लागेको होस् वा नहोस्, यो बेला संविधानको रक्षाको लागि उभिने हो।
उहाँहरु कुनै दल विशेष वा नेता विशेषका लागि भन्दा पनि संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलनमा आउनु भएको हो। संविधानको दायाँबायाँ नहोस् भनेरै सडकमा आउनुभएको हो।
अब हुने नागरिक आन्दोलनमा नियमित जानुहुन्छ?
फुर्सद मिलेसम्म जान्छु। फुर्संद भयो भने र इच्छा भयो नजाने कुरै हुँदैन, जान्छु। अरु थुप्रै बुद्धिजीवी, कलाकार, साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँहरु जानुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरुको आन्दोलन हो, उहाँहरुले गर्नुहोला। उहाँहरुको कार्यक्रममा मैले त ऐक्यबद्धतता जनाउने हो। मेरो पनि समर्थन छ है भनेर देखाउने हो। त्यो ऐक्यबद्धता मैले मात्रै होइन, प्रत्येक चेतनशील नागरिकले जनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।